Inona no tokony hotandremako ny lalana amin'ny ririnina amin'ny efitrano birao PVC? - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Inona no tokony hotandremako ny lalana amin'ny ririnina amin'ny efitrano birao PVC?
Noho ny toetran'ny fihanaky ny thermal sy ny fanakorontanana ny gorodona birao PVC dia maro ny mpanjifa no mitatitra fa matetika tsy voasarika ny tany rehefa ririnina. Raha ny tena izy dia tsy olana lehibe io. Raha mbola mitandrina ihany ianao dia mora apetraka mora foana ny gorodona PVC na dia amin'ny ririnina aza. Ity manaraka ity dia miorina amin'ny traikefa paving an'ny ekipa mpanao fananganana, ary hizara aminao ny valin'ny PVC aho amin'ny ririnina.
Voalohany, tandremo tsara ny fisisihan'ny gorodona mandritra ny fametrahana
Rehefa mampiasa rihana ny biraon'ny PVC dia tsy maintsy mandinika tsara ny fanamafisana tsikelikely ny gorodona sy ny gorodona. Mandritra ny fametrahana dia tokony hihazona ny mari-pana eo amin'ny tany tokony ho 18 ° C. Alohan'ny hametrahana azy dia tokony hafanaina tsikelikely amin'ny rano 5 ° C isan'andro ny gorodona vita amin'ny kongresy mandra-pahatongany amin'ny fenitra 18 ° C. Ao anatin'ny 3 andro voalohany aorian'ny fametrahana ny fametrahana dia ilaina ny manohy hatrany ny mari-pana izany.Amin'ny 3 andro, ny mari-pana dia azo asiana fepetra ilaina, ary ny mari-pana dia azo atao hatrany amin'ny 5 ° C isan'andro.
Faharoa, diniho tsara ny dingana fanafana
Ampiasao voalohany ny fampandehanana geothermal, aloavy tsara ny fanaratoana miadana. Raha ampiasaina amin'ny fotoana voalohany, ny hafanana telo andro voalohany dia tokony hampitombo tsikelikely ny mari-pana: ny rano amin'ny andro voalohany dia 18 ℃, ny andro faharoa dia 25 ℃, ny andro fahatelo dia 30 ℃, ary ny andro fahefatra dia atsangana amin'ny hafanana mahazatra, izany hoe, ny mari-pana dia 45 ℃ ary ny mari-pana kosa dia 28 30 ℃ 30 ℃. Aza haingana loatra haingana.Raha dia haingana loatra dia mety hivezivezy sy hikorontana ny gorodon'ny PVC noho ny fanitarana.
3. Dia ampiasaina indray rehefa avy ela, ary ny fanafana dia tokony hatao tsikelikely ihany koa.Rehefa ampiasaina indray ny rafitry ny famerenana ny geothermal rehefa afaka fotoana fohy, dia tsy maintsy hatsangana mafy ny mari-pana araka ny fandaharam-pampana.
Fahefatra, tsy tokony ho avo loatra ny mari-pana
Tsara homarihina fa rehefa mampiasa hafanana geothermal dia tsy tokony hihoatra ny 28 ° C ny mari-pana, ary ny rano fantson-drano dia tsy tokony hihoatra ny 45 ° C. Raha mihoatra io mari-pana io dia misy fiantraikany eo amin'ny serivisy serivisy sy ny serivisy fidirana amin'ny biraon'ny birao PVC. Ny fianakaviana antonony dia mahazo aina amin'ny ririnina rehefa mahatratra 22 ° C. Ny mari-pana mahazatra dia tsy hisy fiantraikany amin'ny fampiasana ny gorodona geothermal.
Inona no tokony hotandremako ny lalana amin'ny ririnina amin'ny efitrano birao PVC? Ny atiny mifandraika